Indawo kaNoBi-iGumbi laBucala kunye neBalcony - I-Airbnb
Indawo kaNoBi-iGumbi laBucala kunye neBalcony
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguAbi
Indawo ethobekileyo imi ePort Barton. Indawo kaNOBI yindlu yeendwendwe ezine. Igumbi ngalinye liza negumbi lokuhlambela elikhulu labucala. Iindwendwe zixhamla kwibalcony kunye nethafa apho unokuphola khona emva kosuku olude oludinayo.
Ukuba ufuna ukuba nendawo ezolileyo yokuphumla kwaye ucinge ukuba buhle kangakanani ubomi, ke le ndawo yeyakho!
Ngokuqinisekileyo wamkelekile kakhulu kwindawo yethu.
-Nomer & Abi
IPort Barton yilali encinci kwisiqithi esihle sasePalawan. IPort Barton ayidli ngokutsala abantu abafuna ubunewunewu, abakhenkethi bemeko. Endaweni yoko, iye yaba lukhetho oludumileyo lwabakhweli abahamba ngobhaka kunye nabakhenkethi bamazwe aphesheya, abaxabisayo kwaye bayonwabela imo elula, entsha, kunye nekhululekileyo yale lali inoxolo elunxwemeni kumda wehlathi elinemvula.
Indawo yethu ikwindawo evulekileyo apho unokubona iintaba ukude. Into oyibona rhoqo kusasa imema ithemba elitsha kunye nokuzonwabisa ukuba kuze kwaye kuphele ngesibhakabhaka esiorenji esixela ukuba lixesha lokuphumla kwaye ukhumbule okwenzeka imini yonke.
Sikwanayo negumbi lokulala elikhulu (ibhedi etofotofo iyadityaniswa) kunye nendawo yokuhlambela.
Indawo ilula kwaye ikhululekile kakhulu. Kude kwingxolo yemoto.
Kukwakho neziko lezempilo, isikhululo samapolisa (kwimeko yonxunguphalo) kunye neBar kunye neNdawo yokutyela eyintandokazi yedolophu ekufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Abi
A teacher and a friend :-)
I am currently working as a teacher at the nearby school.. Together with my partner, Nomer, we are pleased to share our little home with you.
Indawo kaNoBi iyafumaneka kwimibuzo nge-imeyile, ngemiyalezo okanye ngeefowuni. Sinokukunceda ulungiselele ukhenketho lweSiqithi sokutsiba, i-kayak kunye nerenti yesithuthuthu kunye nokudluliselwa kweveni ukusuka kwi-PPS ukuya ePort Barton naseVice Versa.
Indawo kaNoBi iyafumaneka kwimibuzo nge-imeyile, ngemiyalezo okanye ngeefowuni. Sinokukunceda ulungiselele ukhenketho lweSiqithi sokutsiba, i-kayak kunye nerenti yesithuthuthu kuny…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- San Vicente